ပလပ်စတစ်အပိုပစ္စည်းစက်ရုံ - တရုတ်ပလပ်စတစ်အပိုပစ္စည်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ
နည်းပညာ & After- ရောင်းအားဝန်ဆောင်မှု
ပိုးမွှား - အေးဂျင့်
ခရမ်းလွန် Absorber ကို BP-6
ဓာတုဗေဒအမည်: 2,2′-Dihydroxy-4,4′-dimethoxybenzophenone CAS NO.:131-54-4 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C15H14O5 မော်လီကျူးအလေးချိန်： 274 သတ်မှတ်ချက်： အသွင်အပြင် - အဝါရောင်အမှုန့်ပါဝင်မှု% - ≥98.00အရည်ပျော်မှတ် DC: ≥ ၁၃၅.၀ မတည်ငြိမ်သောပါဝင်မှု% - .50.5 အလင်းထုတ်လွှင့်မှု - ၄၅၀nm ≥90% ၅၀၀၀၀ မီလီမီတာ - ၉၅% အသုံးပြုခြင်း： BP-6 ကိုအမျိုးမျိုးသောစက်ရုံပလတ်စတစ်များ၊ ကုတ်အင်္ကျီများ၊ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်၊ ဆိုးဆေးများ၊ အဝတ်လျှော်ထုတ်ကုန်များနှင့်အထည်အလိပ်များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ acrylic colloids နှင့် o တည်ငြိမ်မှု ...
ခရမ်းလွန် Absorber ခရမ်းလွန် -2
ဓာတုဗေဒအမည်: Ethyl4- (((ethylphenylamino) methylene) -amino) benz CAS NO.:65816-20-8 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C18H20N2O2 မော်လီကျူးအလေးချိန်： 296.36 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်: အသွင်အပြင်: အဝါရောင်မှအဖြူရောင်အမှုန့်အမှုန့်သိပ်သည်းဆ: 1.04g / cm3 အရည်ပျော်မှတ် - ၆၂-၆၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အပူချိန် - ၇၆ mm mmHg တွင် ၄၂၉.၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် Flash point - ၂၁၃.၆ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အငွေ့ဖိအား - ၂၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်တွင် 1.39E-07mmHg အသုံးပြုခြင်း။ PU, PP, ABS, PE, high density polyethylene တွင်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ , အနိမ့်သိပ်သည်းဆ polyethylene အထုပ်နှင့်သိုလှောင်မှု: 1.25kg ကတ်ထူပြားစည် 2. တံဆိပ်ခတ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့, ...
ခရမ်းလွန် Absorber ခရမ်းလွန် -3039
ဓာတုဗေဒအမည်: Octocrilene CAS NO: 6197-30-4 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ： C24H27NO2 မော်လီကျူးအလေးချိန်： ၃၆၁.၄၈ အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် - အသွင်အပြင် - ပွင့်လင်းသောအဝါရောင်ဆိုးဆေးအရည်စာ - 95.0 ~ 105.0% တစ် ဦး ချင်းအညစ်အကြေး - .50.5% စုစုပေါင်းအညစ်အကြေး - ၂.၀% - ခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း≤3.0% တုံ့ပြန်မှုအညွှန်းကိန်း N204): 1.561-1.571 တိကျသောဆွဲငင်အား (D204): 1.045 -1.055 အက်ဆစ် m 0.1mol / L NaOH ≤: ≤ 0.18 ml / mg ကျန်နေတဲ့ပျော်ရည်များ (Ethylhexanol): p 500ppm အထုပ်နှင့်သိုလှောင်မှု - ၁.၂၅ ကီလိုဂရမ်ပလပ်စတစ်စည် kg 200kg သံမဏိ -plastic စည်သို့မဟုတ် 1000L IBC ကွန်တိန်နာ 2.Pr ...
Nucleating အေးဂျင့် NA21 TDS
ဝိသေသလက္ခဏာများ: Polyolefin များအတွက်အလွန်ထိရောက်သော nucleating agent, matrix resin ၏ကြည်လင်ပြတ်သားမှုအပူချိန်, ပုံပျက်အပူချိန်, rensie အစွမ်းသတ္တိ, မျက်နှာပြင်အစွမ်းသတ္တိ, ကွေးကိန်းပကတိတန်ဖိုးသက်ရောက်မှုအစွမ်းသတ္တိကိုမြှင့်တင်နိုင်စွမ်း, ထို့အပြင်ကြောင့်အလွန်လျှင်မြန်စွာ matrix ကိုဗဓေလသစ်၏ပွင့်လင်း။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးညွှန်းကိန်း: အသွင်အပြင်အဖြူရောင်ပါဝါ Molting Point (o C) 10210 Qranularity (μm) Vol3 Volatile (105 o C-110 o C, 2h) <2% အကြံပြုထားတဲ့အကြောင်းအရာ: Polyolefin granulation p ...
Nucleating အေးဂျင့် NA3940
အမည်： 1,3: 2,4-Bis-O- (4-methylbenzylidene) -D-sorbitol ony 1,3: 2,4-Bis-O- (4-methylbenzylidene) sorbitol; 1,3: 2,4-Bis-O- (p-methylbenzylidene) -D-sorbitol; 1,3: 2,4-Di (4-methylbenzylidene) -D-sorbitol; 1,3: 2,4-Di (p-methylbenzylidene) sorbitol; di-p-methylbenzylidenesorbitol; ဂျယ်လ်အားလုံး MD; ဂျယ်အားလုံး MD-CM 30G; ဂျယ်အားလုံး MD-LM 30; ဂျယ်လ်အားလုံး MDR; Geniset MD; Irgaclear DM; Irgaclear DM-LO; Millad 3940; NA 98; NC 6; NC6(nucleation အေးဂျင့်); TM3Molecular Formula: C22H26O6 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၃၈၆.၄၄ CAS မှတ်ပုံတင်ခြင်း ...
Nucleating အေးဂျင့် NA3988 TDS
အမည်: 1,3: 2,4-Bis (3,4-dimethylobenzylideno) sorbitol Synonyms: Millad 3988; Millad 3988I; Millad 8C41-10; Nucleating agent 3988 မော်လီကျူးဖော်မြူလာ - C24H30O6 CAS NO: 135861-56-2 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၄၁၄.၄၉ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အရည်အသွေးညွှန်းကိန်း - ပစ္စည်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်အညွှန်းများအသွင်အပြင်အဖြူရောင်အရသာမရှိသောအမှုန့်ခြောက်သွေ့မှုကြောင့်ဆုံးရှုံးမှု， ≤% 0.5 အရည်ပျော်မှတ်， ℃ 255 ～ 265 Granularity (Head) ≥325အသုံးပြုမှုများ - Nucleating transparent agent DB-3M သည်အစေးကိုကြည်လင်ပြတ်သားစွာကြည်လင်စေရန် ...
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ခြင်း： ကုန်ပစ္စည်းအမည် - ၂-ကာဗိုစီသိုင်း (ဖင်နင်) ဖော့စဖင်နိုက်အက်စစ်၊ ၃ (Hydroxyphenylphosphinyl) -propanoic acid အတိုကောက် - CEPPA, 3-HPP CAS NO.:14657-64-8 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၂၁၄.၁၆ မော်လီကျူးပုံသေနည်း - C9H11O4P အိမ်ခြံမြေ - ပျော်ဝင်နိုင်သည်။ ရေ၊ ဂလိုက်ကိုးနှင့်အခြားအရည်များ၊ ပုံမှန်အပူချိန်တွင်အားနည်းသောစုပ်ယူနိုင်မှု၊ အခန်းအပူချိန်တွင်တည်ငြိမ်သည်။ အရည်အသွေးအညွှန်းကိန်း： အသွင်အပြင်အဖြူရောင်အမှုန့်သို့မဟုတ်ကြည်လင်ပြတ်သားမှု (HPLC) .099.0% P ≥14.0± 0.5% အက်ဆစ်တန်ဖိုး - ၅၂၂ ± ၄ မီလီဂရမ် / g Fe ≤0.005% ကလိုရိုက် - :0.01% M ...
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားထုတ်ကုန်အမည်: ၉,၁၀-ဒီဂျိုက် - ၉ - အိုကင်း - ၁၀ - ဖော့စဖဖန်နantren - ၁၀ - အောက်ဆိုဒ်အတိုကောက် - DOPO CAS NO.:35948-25-5 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၂၁၆.၁၆ မော်လီကျူးပုံသေနည်း - C12H9O2P အိမ်ခြံမြေ - အချိုး - ၁.၄၀၂ (၃၀ ℃℃) ) အရည်ပျော်မှတ်: ၁၁၆ ℃ -120 ℃အပူချိန် 200 ℃ (1mmHg) နည်းပညာညွှန်းကိန်း white အဖြူရောင်အမှုန့်သို့မဟုတ်အဖြူရောင်အလွှာ Assay (HPLC) ≥99.0% P ≥14.0% Cl ≤50ppm Fe ≤20ppmလျှောက်လွှာ: Non-Halogen ဓာတ်ပြုခြင်းမီးလျှံ PCB နှင့် semiconductor encap များတွင်အသုံးပြုနိုင်သည့် Epoxy resins အတွက် retardants ...
ကုန်ပစ္စည်းခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်းကုန်ပစ္စည်းအမည်: ၆ (၂.၅-ဒီဟိုက်ဒရိုစီဖင်နင်) -6H-dibenz [c, e] [1,2] oxaphosphorine-6-oxide CAS NO.:99208-50-1 မော်လီကျူးအလေးချိန် - ၃၂၄.၂၈ မော်လီကျူးပုံသေနည်း - C18H13O4P ပိုင်ဆိုင်မှု: အချိုး: 1.38-1.4 (25 ℃) အရည်ပျော်မှတ်: 245 24 ~ 253 ℃နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း： အသွင်အပြင်အဖြူရောင်အမှုန့်အကဲဖြတ်ခြင်း (HPLC) ≥99.1% P ≥9.5% Cl ≤50ppm Fe ≤20ppmလျှောက်လွှာ: Plamtar-DOPO-HQ သည် အသစ်တီထွင်ထားသော fosfat halogen-free flame retardant သည် PCBA ကဲ့သို့အရည်အသွေးမြင့် epoxy ဗဓေလသစ်၊ TBBA ကိုအစားထိုးရန်၊
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်အသားထုတ်ကုန်အမည်: [(6-Oxido-6H-dibenz [c, e] [1,2] oxaphosphorin-6-yl) methyl] butanedioic acid CAS NO.:63562-33-4 မော်လီကျူးပုံသေနည်း: C17H15O6P အိမ်ခြံမြေ: အရည်ပျော်ခြင်း အမှတ်: 188 ℃ ~ 194 ℃ပျော်ဝင်မှု (g / 100g solvent), @ 20 @: ရေ: lnsoluble, Ethanol: ပျော်ဝင်, THF: ပျော်ဝင်, Isopropanol: ပျော်ဝင်, DMF: ပျော်ဝင်, Acetone: ပျော်ဝင်, Methanol: ပျော်ဝင်, MEK: ပျော်ဝင် နည်းပညာဆိုင်ရာအညွှန်းကိန်း： ပုံပန်းသဏ္ဌာန် - အဖြူရောင်အမှုန့်အကဲဖြတ်ခြင်း (HPLC) ≥99.0% P ≥8.92% Cl ≤50ppm Fe ≤20ppmလျှောက်လွှာ: DDP သည်အမျိုးအစားအသစ်တစ်ခု ...
UV absorber သည်အလင်းတည်ငြိမ်မှုတစ်မျိုးဖြစ်ပြီးနေရောင်ခြည်နှင့်ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ကိုစုပ်ယူနိုင်သည်။
မီးလျှံတားသောပစ္စည်းသည်လောင်ကျွမ်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်သောကြောင့်လောင်ကျွမ်းရန်မလွယ်ကူသောအကာအကွယ်ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ Flame retardant သည် firewall ကဲ့သို့သောပစ္စည်းအမျိုးမျိုး၏မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင်ဖုံးအုပ်ထားပါသည်။ ၎င်းသည်မီးကိုလောင်ကျွမ်းသောအခါမီးလောင်ခြင်းမရှိစေရန်နှင့်မီးလောင်မှုအကွာအဝေးကိုပိုမိုဆိုးရွားစေခြင်းနှင့်တိုးချဲ့ခြင်းမပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်နိုင်ငံများ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်ရေး၊ ကမ္ဘာတဝှမ်းလုံးရှိသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာသုတေသန၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အသုံးချခြင်းကိုအာရုံစိုက်လာသည်။
123456 နောက်> >> စာမျက်နှာ ၁ / ၉
လိပ်စာ： အခန်း ၁၄၀၉၊ တရုတ်ပြည်၊ ကျူစုပြည်နယ်၊ ဖူးကူခရိုင်၊ နူကျင်းမြို့နယ်၊ ၂၀ Xinghuo လမ်းမ၊